» रुसको राष्ट्रपती भ्लादमिर पुटिनले शरीर अस्वस्थ भएको कारण राजिनामा दिदै! रुसको राष्ट्रपती भ्लादमिर पुटिनले शरीर अस्वस्थ भएको कारण राजिनामा दिदै! – हाम्रो खबर
रुसको राष्ट्रपती भ्लादमिर पुटिनले शरीर अस्वस्थ भएको कारण राजिनामा दिदै!
बेलायती अखबार द सनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पदबाट राजीनामा दिन लागेको दावी गरेको छ । रुसी उच्च स्रोतले बताए’को भन्दै पुटिनले स्वा:स्थ्यको कार:ण राजीनामा दिने द सनले उल्लेख गरेको छ ।
समाचार अनुसार पुटिनले २०२० को अन्त्यसँगै पद’बाट राजी’नामा दिने सम्भावना रहेको छ । औप’चारिक रुपमा जानकारी नगराइए पनि ६८ बर्षका पुटि’नलाइ पार्कि’न्सन्स रो’ग लागेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । किनकि उनले पा’र्किन्सन्स रोगसँग मिल्ने लक्षण’हरु देखाइ’रहेको अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यम हरुले पनि बताइरहेका छन् ।
त्यस्तै रुसका विज्ञ’हरुले पनि साोही रोगका का’रण उनकी ३७ बर्षीया प्रेमिका एलिना कबा:एबाले पनि पद छाड्न आग्रह गरिरहेको समाचार माध्यमहरुले बताए’का छन् । उनले २०२१ को जनवारीमै पद हस्तान्त’रण गर्न सक्ने बताइएको छ ।
पछिल्लो समय सार्व’जनिक भएको भि’डियोमा पुटिन कुर्सीमा बस्दा खु’ट्टाहरु निरन्तर काँ’पिरहेको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । त्यस्तै उनले कलम समाउँदा पनि औंलाहरु काँपि’रहेको देखि’एको दावी गरिएको छ ।
त्यस्तै भिडियो’मा औषधि’समेत सेवन गरिरहेकाे देखिने गरेकाे समाचार माध्यमहरुले बताएका छन् । शक्तिशाली मुलुक’हरुको सूचीमा पर्ने रुसको राष्ट्र प्रमुखको राजी’नामाको बिषयलाई अन्तरा’ष्ट्रियस्तरमा महत्वका साथ हेरिएको छ । यो खबर न्युज२४नेपाल’बाट लिएको हो ।